Yenza iSicwangciso sakho sokuyeka - i-802Quits
Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA » Yenza isicwangciso sakho sokuyeka
YENZA ISICWANGCISO SOKUYEKA
Amathuba akho okuyeka ngempumelelo icuba angcono xa unesicwangciso sokuyeka ukuyeka.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuyeka ukutshaya, ukuphapha okanye ezinye iimveliso zecuba? Akukho ndlela inye efanelekileyo yokuyeka. Ukuba uzame enye indlela kwixa elidlulileyo kwaye ayisebenzi, cinga ukuzama enye. Siza kukuhamba ngeendlela zokwakha kunye nokusebenzisa isicwangciso sakho sokuyeka.
UKUQALISA UKUQALA NGOKU.
Ukuyeka kunzima, kodwa
ikhuthaza impumelelo yakho. Gcwalisa amanyathelo ama-6 alula ukuze ufumane isicwangciso sakho sokuyeka ukuyeka. Yenza esakho isicwangciso ngokulandela la manyathelo angezantsi. Unokuzikhuphelela, uprinte kwaye ungeze isicwangciso sakho sokuyeka kwiikhalenda zakho ezikwi-Intanethi.
BEKA UMHLA WOKUPHUMA
Qala ngokumisela umhla oza kuyeka ngawo
Khetha usuku kwiiveki ezimbini ezizayo. Oku kuya kukunika ixesha elaneleyo lokulungiselela.
UMHLA WAM WOKUPHUMA
Inikotini ayisebenzi kwinkqubo yakho.
Iimpawu zokurhoxa emzimbeni ziyaphela.
Iminqweno evela kwiimvakalelo kunye neziqhelo ezinokubangela inokuqhubeka.
KHETHA IZizathu ZAKHO ZOKUYEKA
Zininzi izizathu zokuyeka ukutshaya, iisigarethi ze-elektroniki (i-e-cigarettes) okanye ukusebenzisa ezinye iintlobo zecuba. Zonke zilungile. Khetha izizathu zakho. Baza kongezwa kulwabiwo lwakho olucwangcisiweyo.
Chonga abo bakhoyo
Ukwazi izinto zakho ezibangela ukuba uhlale unolawulo. Xa uqala ukuyeka, unokufuna ukuthintela ngokupheleleyo okubangela. Emva kokuhlala ungenacuba okwethutyana, unokufumana ezinye iindlela zokujongana nezinto ezibangela ukuba ufune ukutshaya. Khetha izinto ezibangela ukuba usebenzise icuba. Baza kongezwa kwi "Cebo lam lokuyeka".
Izinto ezibangela iimvakalelo
Ukupholisa emva komlo
Ukuthatha ikhefu lomsebenzi
Ukuya kumnyhadala wentlalo
Ukubona omnye umntu etshaya
Lungiselela ukulwa neminqweno
Iminqweno ihlala kuphela imizuzu embalwa-kodwa loo mizuzu inokuba namandla. Khetha iintlobo zeenkanuko oqhele ukuba nazo. Iingcebiso zokubetha ezi nkanuko ziya kongezwa kulungelelwaniso lwakho "lweSicwangciso sokuyeka."
Ngaba kufuneka ugcine izandla nomlomo zixakekile?
Bamba umququ ngesandla sakho uphefumle ngawo.
Dlala ngengqekembe okanye ipaperclip ukugcina izandla zakho zixakekile.
Ngaba usebenzisa icuba ukukhupha uxinzelelo okanye ukuphucula imeko yakho?
Ziqhelanise nokuphefumla nzulu ukuzola okanye wenze ezinye i-pushups ukuvuthela umphunga.
Jika uye kubahlobo, usapho, kunye nabacebisi xa ufuna umntu onokuthetha naye.
Ngaba unengxaki yokuhlala uxakekile kwaye ugcina ingqondo yakho?
Yenza uluhlu lwemisebenzi onokuyifeza xa umnqweno uhlasela. Olu luhlu lunokubandakanya imisebenzi yasekhaya, ukuphendula kwii-imeyile, ukuhambisa imiyalezo, okanye ukucwangcisa ishedyuli yakho yosuku olulandelayo.
Ngaba uyacaphuka kwaye ube nexhala ngaphandle kwecuba?
Unyango lokutshintsha iNicotine (i-NRT), olunje ngamachaphaza, intsini, okanye i-lozenges, ziyanceda ekunciphiseni iimpawu zakho zokurhoxa. Thetha nogqirha wakho ukuze ubone ukuba loluphi uhlobo lwe-NRT olulungele wena.
Ngaba usebenzisa icuba ukonyusa amandla?
Ukugcina amandla akho ezinzile, yenza imithambo rhoqo kwaye ube nokutya okulula okusempilweni imini yonke.
Qinisekisa ukuba ulala ngokwaneleyo ebusuku ukukunceda ungaziva ucotha emini.
Ngaba uyayisebenzisa icuba kuba iyonwabisa kwaye iyaziphumza?
Ziphathe ngokwakho ulonwabo olwahlukileyo. Mamela iingoma zakho ozithandayo, cwangcisa ubusuku bebhayisikobho kunye nabahlobo okanye ugcine i-cigarette yakho, i-e-cigarette, ukuhlafuna icuba okanye imali ye-snuff ukuze ufumane into ekhethekileyo xa ufikelela kwisiganeko esingenakho ukutshaya.
ZISuse izikhumbuzo zetyuba
Ukubona izikhumbuzo zecuba kwenza kube nzima ukuhlala ungatshayi. Lahla naziphi na izikhumbuzo ekhayeni lakho, emotweni nasemsebenzini ngaphambi kosuku lokuyeka. Apha ngezantsi kukho uluhlu lwezikhumbuzo eziqhelekileyo kunye nendlela yokujongana nazo. Olu luhlu luya kongezwa kwi "My Plan Plan".
Hlamba iimpahla zakho, ngakumbi ibhatyi oyinxibayo xa uthatha umsi.
Coca imoto yakho.
Lahla iimatshisi, iitreyini, kunye nazo naziphi iimpundu zemidiza ezingaphandle kwekhaya lakho.
Beka izinto zokulwa ezifana nomququ, i-nicotine gum, okanye uluhlu lwemisebenzi — kwiindawo ogcine kuzo imidiza yakho, iitreyini, imatshisi kunye nezinto zokulayita.
YEKA UNCEDO OLONGEZIWEYO
802quits.org inezixhobo ezininzi zokwenza ukuyeka kube lula. Phonononga ezi zixhobo kwaye ukhethe ezo zinomdla kuwe. Baza kongezwa kwi "Isicwangciso sam sokuyeka" sakho kunye nolwazi malunga nendlela yokuzisebenzisa.
Tsalela umnxeba 1-800-YEKA NGOKU simahla ukuhambelana nokuyeka ukunceda ngoncedo lomntu ngamnye. Abaqeqeshi beQuitline bafumaneka nge-24/7, ngenkxaso eyongezelelweyo nge-imeyile nangombhalo. Kubandakanya amabala asimahla, intshungama kunye neeloshini.
Fumana uncedo lokuyeka kunye neVermont Quit Partners iqela elincinci lenkxaso yoontanga. Iintlanganiso zeveki zeeveki ezi-4 ukuya kwezi-6 ziyafumaneka kulo lonke ilizwe. Kubandakanya ii-patches zasimahla, i-gum kunye ne-lozenges.
Ku-802quits.org, yeka ngokwakho ngoncedo lwezixhobo ezikwi-intanethi kunye nezixhobo ezinjengeebhodi zemiyalezo. Kuquka iindawo ezisimahla, iintsini kunye neeloshini.
Sebenzisa amayeza kunye / okanye unyango lwe-nicotine (NRT) kunokuwaphucula amathuba akho okuyeka okuhle. Thetha nomboneleli wakho wezempilo ukuze ufumane ukuba zeziphi iindlela ezikulungeleyo.
Xelela abahlobo kunye nosapho.
Ukuyeka icuba kulula xa uxhaswa ngabantu obathandayo.
Umxholo uhlengahlengiswe ngemvume evela kwiZiko leSizwe loMhlaza kunye neSmokefree.gov